Hey DAN: Ahoana no ahafahan'ny Voice to CRM manamafy ny fifandraisanao amin'ny varotra sy mitazona anao ho salama | Martech Zone
Be loatra ny fivoriana tsy maintsy amboarina amin'ny andronao ary tsy ampy ny fotoana hanoratana ireo teboka manan-danja ireo. Na ny ekipa talohan'ny areti-mifindra, ny varotra ary ny varotra dia matetika manana fivoriana ivelany mihoatra ny 9 isan'andro ary ankehitriny miaraka amin'ny lambam-pandriana miasa lavitra sy hybrid ao anatin'ny fotoana maharitra, mihamitombo ny habetsahan'ny fivoriana virtoaly. Ny fitazonana firaketana an-tsoratra marina momba ireo fivoriana ireo mba hahazoana antoka fa voakolokolo ny fifandraisana ary tsy very ny angon-drakitra mifandray amin'ny fifandraisana dia lasa asa mampatahotra sy mandany fotoana, ary izany no ahafahan'ny feo amin'ny vahaolana CRM mividy fotoana anao, manohana ny taranaka mpitarika ary mitahiry ny herinao.
Hey DAN Voice ho an'ny CRM Assistant
Voice to CRM mpanampy Hey DAN mandika ny fivoriana sy mametraka ny antsipirian'ny fifandraisana ary mivory amin'ny alàlan'ny angon-drakitra CRM. Tian'ny Fortune 500, ity mpanampy feo ity dia miasa amin'ny CRM rehetra, ao anatin'izany Salesforce, MS Dynamics, ary Hubspot. Manatsara ny fananganana CRM izy io, mampitombo ny kalitaon'ny angona amin'ny 200%, ary manome ora 4-6 isan-kerinandro amin'ny fotoana fivarotana fanampiny. Miaraka amin'ny tanjon'ny fanatsarana ny fomba fijerin'ny mpanjifa sy ny fanafoanana ny enta-mavesatry ny fitantanan-draharaha, dia manana ny fampandehanana ny fampiharana sy ny protocol fiarovana henjana izy io mba haka avy hatrany ny naoty fivoriana, karatra fandraharahana, handamina ny fanaraha-maso ary hitantana ny fandaniana.
Ahoana no ahafahan'ny Voice to CRM Accuracy ao amin'ny Hey DAN Support Lead Generation?
Ny fiantohana fa ny fanaraha-maso dia atao amin'ny olona mety amin'ny fotoana mety ary ny ekipan'ny varotra dia mitam-piadiana miaraka amin'ny faharanitan-tsaina mety, dia singa iray manan-danja amin'ny paikady varotra mahomby. Hey DANNy fikarohana nataon'i dia mampiseho fa raha miandry iray andro monja ny solontenan'ny varotra iray alohan'ny hampidirana ny naoty fivoriana ao amin'ny rafitra CRM dia very hatramin'ny 40% amin'ny antsipirian'izany fifamatorana izany. Mba hanomezana hery ny ekipan'ny varotra hanao izay tsara indrindra vitany, manangana sy manamafy ny fifandraisana mahasoa, ny fampidirana angon-drakitra CRM marina sy ara-potoana dia zava-dehibe. Ny rindrambaiko Voice to CRM dia manolotra vahaolana haingana sy mazava.
Tao anatin'ny folo taona lasa, nihaona tamin'ny serivisy fandikan-teny ho an'ny angon-drakitra CRM dia niala tamin'ny fiasan'ny olombelona manontolo ho an'ny mpanampy robotika. Mahaliana fa na dia somary vaovao amin'ny lalao aza ireo bots ireo dia mahavita taham-pahamarinana manaitra ihany koa.
Hitanay fa nihatsara be ny feon'ny feo amin'ny CRM tato anatin'ny roa taona farany, miaraka amin'ny taham-pahadisoana nidina avy amin'ny 19% tamin'ny taona 2019 ka hatramin'ny 12% tamin'ny taona 2021. Ny vahaolana Voice to CRM dia manatsara hatrany ny algorithm-ny ary ny ekipa mpamoaka lahatsoratray dia manome fanamarinana fanampiny amin'ny miantoka fa ny hadisoana fandikana ny famoahana dia ahena ho manodidina ny 1% - io fitambarana matanjaka io no mahatonga ny orinasa Fortune 500 hatoky antsika. Ny fanambadiana teknôlôjia amin'ny olona no fifandanjana tonga lafatra eo amin'ny fahombiazana sy ny fanaovana azy tsara.
Kate Zeid, SVP Growth & Operations ao amin'ny Hey Dan
Amin'izao fotoana rehetra izao dia azo ampiasaina handokoana sary mazava kokoa momba ny hoavy sy hampitaovana ny ekipan'ny varotra handray fomba fiasa mirindra kokoa amin'ny fanakatonana fifanarahana. Ny angon-drakitra matanjaka dia mety hitarika amin'ny fifandraisana mahagaga, toy ny famantarana ny asymmetry momba ny fampahalalam-baovao eo amin'ny zavatra tian'ny mpanjifa hianarana sy ny zavatra fantatry ny ekipa mpivarotra momba ny vokatra iray. Izy io dia afaka manampy ny ekipa hamantatra ny hafanan'ny fitarihana ary hirotsaka indray amin'ny fotoana mety sy amin'ny fomba tsara indrindra. Ny famakafakana angon-drakitra amin'ny ambaratonga dia mety hitarika amin'ny fijerena ny filàn'ny mpanjifa ary mampahafantatra ny fivoaran'ny vokatra na serivisy manaraka.
Manorina ny fitohizan'ny ekipan'ny varotra
Mety ho fanamby ny fanenjehana ny ekipan'ny varotra, amin'ny indostria maro dia mety latsaky ny 2 taona ny faharetan'ny mpiasan'ny varotra. Miaraka amin'ny fitantanana ny aretin'andoha amin'ny fandraisana mpisolo toerana ho an'ny mpilalao matanjaka, dia ny alahelon'ny mety hamoy ny fifandraisan'ny mpanjifa izay naorin'izy ireo rehefa mandeha ny fotoana sy ny mety ho vidin'ny famoizana ny orinasany.
Ny fitadidiana ny angon-drakitra momba ny fihaonana marina sy lalina no fanalahidin'ny fandrindrana ny fifandimbiasana. Amin'ny alàlan'ny fiantohana fa ny antsipirian'ny fivorian'ny mpanjifa, manomboka amin'ny isa mety ho fifanarahana nifanarahana tamin'ny Zoom ka hatramin'ny fahatsiarovana ny niarahaba ny mpanorina iray tamin'ny tsingerintaonan'ny fandraharahana, dia napetraka avy hatrany sy mazava tsara ao amin'ny angon-drakitra CRM dia niantoka tamim-pahombiazana ny hoavin'io fifandraisana io ianao.
At Hey DAN Ny feonay amin'ny rindrambaiko CRM dia nandika fivoriana maherin'ny 1 tapitrisa, maneho feo maherin'ny 620,000 minitra. Manome fahatsiarovana andrim-panjakana amin'ny alàlan'ny fandefasana angon-drakitra marani-tsaina ho an'ny ekipan'ny varotra Fortune 500 sy ny akanjon'ny mpandraharaha kely kokoa, miantoka ny fitohizan'ny fifandraisana ary mitondra ny varotra amin'ny farany.
Lozisialy mifanentana amin'ny CRM, Hey DAN, dia afaka manamaivana ny fandaniam-potoana amin'ny fampahatsiahivana ny antsipirian'ireo fivoriana maro izay nitranga nandritra ny andro nafana. Mampahery ihany koa fa ity feo mivoatra mankany amin'ny teknolojia CRM ity dia manatsara hatrany amin'ny firaketana fahitsiana marina, satria ny algorithm dia manohy manakatona ny elanelana misy eo amin'ny fahatsiarovan'ny olombelona sy ny fahaizan'ny bot.
Mamandrika ny Demo Hey DAN anao anio
Tags: CRMhubspotHub Spot CRMFampidirana Hubspotfampidiranataratrafmms dinamikams dynamics integrationNy fanodinana fiteny voajanaharynlpvarotra ekipasalesforce crmfampidirana mpiasafeo ho crmfandikana feo
Kate Zeid, Hey DAN SVP Growth & Operations: Nokaramain'ny Civicom, orinasa ray aman-drenin'i Hey DAN mba hitondra vokatra vaovao eny an-tsena manerana ny vondrona tamin'ny taona 2005, Kate Zeid no nitarika ny fitomboan'ny Hey DAN sy ny ekipan'ny asa. Miasa amin'ny fampandrosoana ny vokatra, ny varotra, ny serivisy mpanjifa ary ny talenta i Kate ary manohy ny fitomboan'ny fidiram-bola amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny taranaka manaraka.